बुहारीको पहिरनप्रति सासुको गुनासो - Muldhar Post
पत्रपत्रिकाबाट २०७६, २६ आश्विन आईतवार 710 पटक हेरिएको
आमाको त्यस्तो कुरा सुनेपछि छोरा हाँस्दै भन्नथाल्यो—‘मम्मी यो त त्यही डायलग होइन, जुन तपाईंलाई हजुरआमाले सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो, तपाईंले यो कुरा हामीलाई धेरै पटक सुनाउनु भएको छ ।’छोराको यस्तो कुरा सुनेपछि सुशीलालाई झट्का लाग्यो ।
उनले आफूलाई सासुले कुर्ता–सुरुवाल लगाउँदा छेड हानेको कुरा सम्झना आयो । तर, कुर्ता–सुरुवाल लगाउँदा त शरीर पुरै ढाकिन्थ्यो, बुहारीको पहिरनमा त सबै शरीर देखिन्छ, त्यसलाई म कसरी सहनसक्छु ? सुशीलाले सोचिन् । जुन स्थिति आज सुशीलाको छ, त्यही स्थिति आज धेरै घरमा सासु र बुहारीबीचमा रहेको हुन्छ । सासुहरुको सोचमा परिर्वतन त आएको छ । तर, त्यति तीव्र गतिले होइन जति नयाँ पिँढी अगाडि बढिरहेको छ ।
परिर्वतनलाई स्वीकार गर्नु । परिर्वतन संसारको नियम हो भन्ने प्रसिद्ध भनाइ छ । संसारमा दिनहुँ केही न केही परिर्वतन भईरहेको हुन्छ । जलवायुमा, सुविधाहरुमा, प्रविधिमा, रहनसहनमा, सम्बन्धमा आदि हरेक ठाउँमा केही न केही परिर्वतन भइरहेको हुन्छ । यो कुरा पहिरनमा पनि लागू हुन्छ । पिँढी नै पिच्छे पहिरनमा परिर्वतन हुन्छ । विशेष गरेर महिलाको पहिरनमा धेरै परिर्वतन हुँदै आएको छ र भविष्यमा पनि भईरहन्छ । समयको परिवर्तनशीलतालाई बुझेर यसलाई स्वीकार गर्न र आफ्नो सोचाइलाई लचिलो बनाउनुपर्छ ।
कुनै पनि पहिरन राम्रो अथवा नराम्रो हुँदैन । पहिरनलाई राम्रो–नराम्रो हाम्रो सोचाईले बनाउँछ । हामी पहिरनलाई जुन दृष्टिले हेर्छौं, त्यही दृष्टिले नै त्यो पहिरनको परिभाषा निर्धारण गर्छ । के तपाईं पनि पहिले जस्तो धोती, चोलो, पटुका लगाउनुहुन्छ ? लगाउनु हुन्न नि ? त्यसैगरी आज भोलिका बुहारीहरुले आफ्नो समय अनुसारको लुगा लगाउने गर्छन् भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । अनलाइन खबरबाट साभार ।